Soosaar waalan oo loogu talagalay mashaariicda mega | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaDaacad u yeelashada mashruucyada mega
30 / 07 / 2015 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Megan jeedinta waalan mashaariicda: Madaxweynaha Erdogan ee dalka Turkiga ayaa waxaa ay astaan ​​u mashaariicda ahee in Shiinaha. Shirkadaha Shiinaha ayaa bixiyay qandaraasyo kala bar qiimaha tartamayaasha caalamiga ah mashaariic badan, gaar ahaan KanalIstanbul
Madaxwayne Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho ku tagay dalka Shiinaha, kaas oo bilaabay maalintiisii ​​ka hor ganacsade 100, ayaa la filayaa inuu saameyn ku yeesho ganacsiga labada dal. Shirkadaha Turkish dalxiiska, in meelo badan oo ka mid ah dhismaha waxaa la filayaa ilaa formation of heshiisyo cusub, iyadoo dhinaca Chinese ajendaha of baaxadda mashaariicda ahee Turkiga lahaa ujeeddooyinka 2023 doonayaan in ay hirgeliyaan. 3 oo ka timid KanalIstanbul waa mid ka mid ah shirkadaha hormoodka ka ah dalka oo ka heley dhiirigelinta xukuumadda Shiinaha. Airport ee, mashruuca tunnel-xawaaraha sare ee tareenka ilaa 30 tartan ku dhow caalamiga ah ee Turkey uu ballan qaaday in la sameeyo ku dhowaad kala bar qiimaha. Shirkadaha Shiinaha, ayaa sheegay in mashaariicda ay ahee ajandaha bilaha soo hor Demokan Madaxweynaha Association dhaqaalaha iyo iskaashiga Dhaqanka Road Silk Shiinaha xigeenka Turkish waa in "shirkadaha Shiinaha, mashaariicda ee Turkey, qiimaheeduna yahay mid macquul qalab iyo shaqaale si ay u hirgeliyaan. Waxay waday shaqo culus muddo dheer. Waxay la xiriiraan Turki. Waxaa kaloo naloo weydiistay inaan caawino arrintan ".
OIZ WAXAA LAGU QAATAA
Waxa uu hoosta ka xarriiqay muhiimada tiknoolajiyada tiknoolajiyadda labada dal, ayuu yiri Eren, in daraasaddan ay bilawday wax soo saarka beeraha. Shirkadaha Shiinaha oo doonaya in la dhiso waa in macluumaadka in zone ah oo abaabulan warshadaha ee Turkey, "shirkadaha Turkish si ay ugu deeqdo shaqada raqiis ah iyo qalabka aan haysan dhibic labaad oo la dhexgeliyey technology sare laga heli karaa," ayuu yiri. ka iman kara dalxiiska ee Turkey ayaa sidoo kale soo galay kiiska ajendaha of shirkadda Chinese. Sida laga soo xigtay SABAH ganacsatada ku soo biiray wafdiga, shirkad Shiineys ah ayaa abuuri doonta xarun dalxiis oo ku yaala Cappadocia. Shirkadda Shiinaha, oo raadinaysa lamaane Turkiga ah, ayaa qorshaynaysa in ay maal-galiso 300 Milyan Dollar oo maal-galin ah. Maalintii ugu horeysay booqashadiisii ​​Shiinaha, heshiiska 3 ayaa la saxiixay.
Wuxuu sameeyey mashruuc qallafsan oo dheeraad ah oo la dulmartay Havaray
Mashruuca Crazy, oo aan la daalin
Mashruucyada Crazy ayaa dhibaato ku qaba Ingiriiska
Mashaariicda Crazy ayaa dhib ku noqon doona Istanbul
Mashruucyada Crazy ayaa sidoo kale ka caagan qiimaha dhulka
Mashruucyada la soo jeediyay ee 'niyadjab' Izmir
Qalabka qarxa ee bamka bamka ku jira Metrobus
RayHaber 30.07.2015 Warbixinta Shirka
dalab Crazy ka Ankara si Beijing: aynu tidicdo shabakad of tareennada la Turkey!
Mashruuca Dhismaha Qalbi Dhagax ee Shiinaha
Mashruuca Mega ee Gaadiidka
Waddada Roobaha ee Rize (Video)